Mihira ny Kristiana Kalvinista ⋆ Singles Grace Fiandrianana
Ny fitadiavana vady kristiana dia mety ho filamina lava izao. Tena marina izany ho an'ny mpitovo Kristiana Kalvinista. Mitady vady tia an'Andriamanitra mitovy aminao fanolorantena fotopampianarana amin'ny vanim-potoana izay ananan'ireo mihambo ho Kristiana manantitrantitra bebe kokoa ny fahatsapana ary manemotra ilay saha efa tery.
Aza kivy. Tsarovy fa ny mpitovo Kristiana Kalvinista dia mahatadidy fa Andriamanitra manana fiandrianana dia miadidy ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny vady ho avy. Tsy maninona izay miankina aminao fotsiny. Aza adino ny mivavaka mandrakariva ho an'ny Tompo mba hitahiany anao vady tia an'Andriamanitra.
Tandremo sao manantena fahalavorariana. Betsaka ny olona ankehitriny (tsy ny Kristiana ihany) no mametraka ny bara avo loatra ka tsy misy mahavita mihaona azy. Mahaiza mandanjalanja amin'ny zavatra antenainao ary manaova fahaiza-manavaka. Ireto misy zavatra vitsivitsy tokony hodinihina rehefa manombatombana ny vady mety hitranga.
Miharihary ve ny vokatry ny fanahy?
“Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, fahalemem-panahy, hatsaram-po, finoana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany.” -Galatianina 5: 22-23
Satria tsy voatery hidika hoe miaina ho an'ny Tompo ny olona tokana Kristiana tokana. Mitadiava ny vokatry ny Fanahy. Tokony ho hita miharihary amin'izay mety ho vady.
Moa ve mahatoky amin'ny fiangonany eo an-toerana ity olona ity?
Tsy dia misy dikany ny hoe mpitovo Kristiana Kalvinista ny olona iray raha tsy miaina am-pahatokiana ny finoany ao anatin'ny sehatry ny fiangonana voatendrin'Andriamanitra. Mety misy olona mihazona fotopampianarana marina nefa tsy miaina izany. Ny "Kristiana tsy mpiangona" dia saina mena lehibe.
Afaka mihalehibe miaraka amin'ity olona ity ve aho? Hanaraka ahy ve izy sa azoko apetraka amin'ity olona ity?
Na dia tsy tokony hieritreritra mihitsy aza ianao fa afaka manova ny lesoka manjelanjelin'ny olona iray, dia tokony ho azonao ny mamantatra raha mety izy ireo na tsia. Raha lehilahy ianao dia manontania tena hoe hanaraka ahy ve ity vehivavy ity? Azony ve ny fanekena ny Baiboly? Raha misy vehivavy manontany, te-hanaraka an'ity lehilahy ity ve aho?
Angamba fomba iray hafa hijerena an'io dia ny manontany tena raha toa ka tianao na tsia ny fanatanterahana ny anjara asan'ny Baiboly amin'ny maha-vady na vadin'ity olona ity anao. Mandehana any amin'ny loholon'ny fiangonanao ary manontania ny torohevitr'izy ireo momba an'io.
Manao ahoana ity olona manam-bola ity?
Mitantana tsara ny volany ve ity olona ity? Manao ahoana ny trosan'izy ireo? Ny fanontaniana momba ny fitantanana ara-bola, na dia tsy mahasarika ny ankamaroany aza, dia manakiana satria misy zavatra vitsivitsy azo ampiharina toy ny vola. Ny fahazarana adala ara-bola no anisan'ny mampijaly indrindra ny fanambadiana. Mety misy olona a Calvinist, Kristiana ary mpitovo, fa ny fahasimbana ara-bola mihoapampana dia tsy manome voninahitra ny olona ho vady tsara amin'ny ho avy.
Tian'ity olona ity ve ny miresaka zavatra ara-panahy?
Faly ve ity olona ity miresaka momba ny zavatr'Andriamanitra sa tsy mahazo aina izy ireo rehefa mitondra ny Baiboly ianao? Ny olona tsy faly miresaka ny marina dia mety tsy liana manokana amin'izany.
Ny zavatra iray hafa manamarika dia ny fahalalany tsara ny raharaha ara-Baiboly raha ampitahaina amin'ny fotoana niara-nandeha tamin'ny Tompo. Ny olona mihambo ho Kristiana nandritra ny taona maro, nefa tsy mahalala ny Baiboly sy ny teolojia kristiana dia mety ho toy izany satria tsy dia liana amin'ny zavatra toy izany.
Misy afaka milaza fa mpitovo Kristiana Kalvinista, fa tena izy ve?
Andao tsy hikatona amin'ny marika ratsy. Raha nahita olona iray niharihary ny vokatry ny Fanahy ianao, tia ny fiangonany eo an-toerana, mahafinaritra ny miaraka, tia miresaka momba ny zavatr'i Kristy, ary mahatakatra ny fiantsoana azy ireo ho lehilahy na vehivavy kristiana… tondro tsara rehetra amin'ny lalao mety - raha heverina fa marina ho anao ireo zavatra ireo.